NamasteNEPALI.com: आफ्नै भाइबाट बलात्कृत युवतीको दर्दनाक बेदना, युवतीको जागिर पनि खोसियो
आफ्नै भाइबाट बलात्कृत युवतीको दर्दनाक बेदना, युवतीको जागिर पनि खोसियो
गत फागुन १२ गते मध्याह्नमा आफ्नै कोठामा भाइबाट बलात्कारको शिकार भएकी २२ वर्षीया एक युवती यतिखेर बेसहारा बनेकी छिन्। आफ्नै परिवार र आफन्तजनले घरबाट निकालेपछि मध्यपुरथिमिकी उनी फागुन १३ गतेदेखि नितान्त एक्ली भएकी हुन्।
अझै पनि बलात्कारका कैयौँ घटना गुपचुप नै राखेर भित्रभित्रै मिलाउने र इज्जत जान्छ भनेर लुकाउने प्रवृत्ति हाबी भएको नेपाली समाजमा बलात्कार गर्ने भाइलाई सजाय दिलाउँदा उनले स्याबासी पाउनुको बदला बेसहारा भएर भौँतारिनु परेको हो।
घर र समाजले मात्रै उनलाई निकालेको होइन, तीनवर्षदेखि आफू काम गर्दै आएको काठमाडौँ रत्नपार्कस्थित फन पार्कको मालिकले समेत जागिरबाट विदा दिएका छन्। त्यसपछि अहिले उनी बेरोजगार बनेकी छिन्।
सँगै जिउने कसम खाएर बिहे गर्ने वाचा गरेका प्रेमी सर्लाही जिल्लाका हुन्। काठमाडौँ पढ्दै आएका त्यस युवकले समेत भाइले बलात्कार गरेको कारण देखाउँदै छाडिदिएपछि उनी यो समाजमा अब आफ्नो भन्ने कोही नभएको बताउँछिन्।
आँखाबाट आँसु झार्दै उनले भनिन्, 'घरमा दिउँसै भाइले बलात्कार गर्योन। आफ्नै घरमा म असुरक्षित भएँ। भाइविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै परिवार र आफन्तले निकालिदिए। न जाने ठाउँ छ न बस्ने ठाउँ।
मनको पीडालाई रोक्न नसकी निकैबेर रोएपछि उनले घटना थाहा पाएपछि फनपार्क सञ्चालकले जागिरबाट निकालेको सुनाइन्। 'घटना थाहा पाएपछि फनपार्क सञ्चालकले नोकरीबाट निकालिदियो। बिहे गरेर जीवनभर सँगै बाँच्ने कसम खाएको प्रेमीले छाडिदियो। अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ?', आँखाभरि आँसु पार्दै उनले सुनाइन्।
बयान लिनका लागि काम गर्ने ठाउँ फनपार्कमै प्रहरी भ्यान पुगेपछि घटनाबारे थाहा पाएका फनपार्क सञ्चालक र साथीहरुले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरेको उनको अनुभव छ। 'अपराध मैले नै गरेको हुँ, मै अपराधी हुँ, म खराब आचरण भएको केटी हुँ जस्तो व्यवहार गरे सबैले। आपत् पर्दा साथ दिनेहरुसमेत कोही भएनन्। म निकै विचलित भएकी छु', उनले सुनाइन्।
स्नातक तहको अध्ययन गरिरहेकी उनी अहिले काठमाडौँको एउटा गर्ल्स होस्टेलमा बस्दै आएकी छन्। विगतमा आफूले काम गरेर बचत गरेको पैसाले मासिक रु सात हजार होस्टेललाई तिरेर बसे पनि अहिले पैसा सिद्धिन लागेर उनमा चिन्ता थपिएको छ।
'होस्टेलमा तिर्ने पैसा नभएर त्यहाँबाट पनि निकालिएँ भने कहाँ जाने? त्यसको कुनै टुङ्गो छैन', उनी भन्छिन्, 'म पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। स्नातकोत्तरसम्म पढ्ने त्यसपछि लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी नोकरी गर्ने चाहना छ तर अहिले बाँच्नकै लागि नोकरीसमेत नहुँदा आफ्ना इच्छा र सपनाहरु चकनाचुर भएका छन् । खै कसरी बाँच्नु अब ?'
त्यसमाथि पनि आफ्नो लोग्नेलाई जेल हालेको भन्दै भाइबुहारीले 'जे पनि हुनसक्छ, बचेर हिँड्नु' भनेर धम्की दिएका कारण उनी निर्धक्क भएर हिँड्नसमेत सकेकी छैनन्।
'म बस्ने होस्टेलका सबैलाई थाहा छ। होस्टेलबाट बाहिर निस्केर हिँड्दा पनि हजार पटक सोचेर निस्कनुपर्छ। कसैले केही गर्ला कि भन्ने डर लाग्छ। यस्तो अवस्थामा पनि मेरो आफ्नो भन्ने कोही छैन', उनले सुनाइन्।
आठ वर्षअघि बुबा बितेपछि ट्राफिक प्रहरीमा रहेका दाइ, थिमिकै एक विद्यालयमा पढाउने दिदी र आफैँले घर व्यवहार धान्दै आएको उनले सुनाइन्। 'भाइले मलाई बलात्कार गरेको कुरा आमा, दिदी, आफन्त कसैले विश्वास गरेनन्। परिवारका सबैले जाहेरी फिर्ता लिनू भनेर धेरै पटक दबाब दिए। भाइबाटै थप असुरक्षित महसुस गरेर मैले मानिनँ। त्यसपछि परिवार पनि आफ्नो भएन', उनले भनिन्।
बलात्कार भएपछि तीन दिन प्रहरी वृत्त थिमिकै संरक्षणमा बसेर तीन दिन ओरेकमा बसेको र १७ गते घरमा जाँदा दिदीले बोल्दै नबोली छुद्र व्यवहार गरेको उनको अनुभव छ। बुहारीले पटक पटक अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरी आक्रमणको प्रयास गरेपछि बाध्य भएर घर छोड्नुपरेको उनले सुनाइन्।
पढाइ छाडेर सधैँ कुलतमा लागेका, आफूले भनेको नमाने घरका सबैलाई कुटपिट गर्दैआएका भाइले श्रीमती माइत गएको दिन फागुन १२ गते दिउँसो १२:३४ बजे कोठामा आएर एक्कासि आफ्नो मुखमा हात छिराएर चल्नै नसक्ने गरी थिचेर लुगा च्यातेका र बलात्कार गरेको बयान टिपिएको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा रहेको अदालतका स्रेस्तेदार खड्गराज अधिकारी बताए।
गत फागुन २८ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले भाइलाई दोषी ठहर गर्दै जबर्जस्ती करणी महलको दफा ३ को उपदफा ५ अनुसार छ वर्ष कैद र हाडनाता करणी १ नं ८ बमोजिम थप १० वर्ष कैद गरी कुल १६ वर्ष कैद र भाइबाट रु तीन लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि भाइ जेल चलान भएको थियो।
'आफ्नो सबै भएर पनि बेसहारा बन्नुपरेको उनलाई कसैले रोजगारी दिए जीवन अलि सजिलो हुने थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई समाजले संरक्षण, हौसला र आँट दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन', महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकी प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्य भन्छन्। एउटा रोजगारीको व्यवस्था मात्रै गरिदिए जीवन चलाउन ती युवतीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। रासस